Vadiwa bhizinesi vadyidzani nevatengesi, Munguva pfupi yapfuura, zvakawanikwa kuti pane makambani uye vanhu vanoshandisa zvisiri pamutemo zita rekambani nekero (Shijiazhuang Mets Machinery co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Tel: 86-311-68058177 ) uye imwe kambani mu ...Verenga zvimwe »
Makorokoto kune vehunyanzvi dhipatimendi vatambi nekuhwina tekinoroji tii
Chikwata chechikwata Makorokoto kune vezvehunyanzvi dhipatimendi vatambi nekuhwina mubairo wehunyanzvi timu, mamwe madhipatimendi anotevedzera iwo muenzaniso. Verenga zvimwe »
Chitubu chiri kuuya, nguva yekunakidzwa!
Chitubu chiri kuuya, nguva yekunakidzwa! Vese vadyidzani vekambani vakaungana panosangana jianhua mugwagwa uye kuchamhembe kwechipiri mhete nzira. Yedu nzira yebhasikoro yaive yekuunganidza poindi-kutora kutendeuka kweHutuo Rwizi-Zhengding Maodzanyemba Sango-Dzorera matanho edu nemunhu wese aive nebhasikoro. Takataura ne e ...Verenga zvimwe »
Kambani yedu inonamatira kune pfungwa yehukama hwezvakatipoteredza uye kuchengetedza zviwanikwa. Munguva pfupi yapfuura mamiriro ekuchengetedza ezvemamiriro ekunze haana kunaka, kambani yedu inopindura zvakanaka uye inoita kugadzirwa kwezvakatipoteredza. 1. Bvisa zvivakwa zvisingachashandi uye Ziva nezvemberi ...Verenga zvimwe »
Pemberera iyo mbiri chitupa chekambani yedu zvakanyanya.
Hebei Hanchang Minerals Co, Ltd. yapfuura ISO9001 yemhando yepamusoro sisitimu setifiketi, OHSAS18001 yebasa ine hutano uye chengetedzo manejimendi system chitupa munaGunyana 1, 2017. Inoratidza kuti kambani yedu yasvika pamwero wepasi rose mukubatanidzwa kwemaneja maneja ...Verenga zvimwe »
Pakubata slurries, vashandisi kazhinji vanofanirwa kusarudza pakati pebhurugwa-rakarongedzwa kana simbi kuvakwa kwavo slurry pombi Ichi chinyorwa chinopa zvimwe zvekutengeserana-kuregedza nemipimo ine chekuita nekushandiswa kweimwe yeaya maviri slurry pombi dhizaini. Tafura 1 pakupera kwechinyorwa chino prov ...Verenga zvimwe »
Zvinoumba pombi yeslurry
Impeller Iyo impeller, ingave elastomer kana yakakwira-chrome zvinhu, ndicho chinhu chikuru chinotenderera icho chinowanzo kuve nemavanes ekupa simba re centrifugal kune iro mvura. Casing Split yekunze casing mahafu esimbi yakakandwa ine ekupfeka liners uye inopa yakanyanya kushanda kumanikidza kugona. The casing sha ...Verenga zvimwe »
Welcome vatengi vatengi kushanyira boka redu! Verenga zvimwe »
Pombi indasitiri kuvandudza uye kuongorora
1.1 pombi indasitiri ine nhoroondo refu Pombi ndiwo mushini wekare. Nyika dzekuEurope fekitori yepombi yekutanga-yakavakwa pakati pezana ramakore rechi20, anopfuura gumi senge kambani yeUnited States Wortington yakavakwa muna 1980, Ingersoll Rand-kambani yakavakwa muna 1860, Byron-Jackson comp ...Verenga zvimwe »
Ko centrifugal slurry pombi inoshanda sei?
Kufanana nemapombi mazhinji, iyo centrifugal pombi inoshandura michina simba kubva kumota kuenda kune simba remvura inoyerera mamwe emagetsi anopinda mukinetic energy yekufamba kwemvura, uye mamwe kuita simba rinobvira, rinomiririrwa nemushonga wemvura kana nekusimudza chinoyerera chakanangana negiravhiti kusvika padanho repamusoro. Kune zvimwe ...Verenga zvimwe »